China Lacquer Kitchen Cabinets အပြင်ဘက်မီးဖိုချောင်ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - J&S
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > မီးဖိုချောင်ကက်ဘိနက်တံခါး > ယွန်းမီးဖိုချောင်တံခါး
ကျွန်ုပ်တို့သည် Lacquer Kitchen cabinets အပြင်ဘက်မီးဖိုချောင်ဒီဇိုင်းကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ဆေးသုတ်ထားသောတံခါးပြားများသည် MDF ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအရောင်တင်ခြင်းကဲ့သို့သောအပူချိန်မြင့်မြင့်တွင်ဖုတ်သည်။ ၎င်းကိုအဓိကအားဖြင့်သတ္တုပေါင်မုန့်ဖုတ်ခြင်းနှင့်စန္ဒရားမုန့်ဖုတ်ခြင်းဖြင့်ခွဲထားသည်။ ၄ င်းတွင်ပရိုဖိုင်းအမျိုးမျိုး၊ တောက်ပသောအရောင်များနှင့်ကောင်းမွန်သောအလှဆင်မှုများရှိသည်။ ဆေးသုတ်ထားသောတံခါးပြား၏မျက်နှာပြင်သည်တောက်ပနေပြီးမျက်နှာပြင်ကိုအလင်းရောင် ပေး၍ အခန်းအားအလင်းပေးရပါမည်။ ယွန်းတံခါးမျက်နှာပြင်တွင်ပလတ်စတစ်၊ ရေစိုခံ၊ အစိုဓာတ်ထိန်းနိုင်မှု၊ မီးခံနိုင်စွမ်းစသည်တို့ပါဝင်သည်။
၁၈ မီလီမီတာ MDF Ï = ၇၅၀ မှ ၇၈၀ ကီလိုဂရမ် / m3 မြင့်မားသောခွန်အား၊ ပုံပျက်ရန်မလွယ်ကူပါ၊
anPPanel သည်ပန်းချီကားငါးချောင်းနှင့်အတူရှိရမည်၊ PE အခြေခံပန်းချီသုံးလွှာ၊ အလွှာနှစ်ခုသည် PU ပန်းချီဖြစ်သည်။
ဗီရိုထုံးစံ, မီးဖိုချောင်ဗီရို, Glass ကို Splashback
အဆောက်အ ဦး အပြင်မီးဖိုချောင်ဒီဇိုင်း၊ မီးဖိုချောင်
အလယ်အလတ်သိပ်သည်းဆအမျှင် (MDF / PLYWOOD)
E0, E1 တန်း Formaldehyde ထုတ်လွှတ်မှု ၀.၀၈ မီလီဂရမ် / m³
20GP (ပြား ၁၀၀၀ ခန့်)
Lacquer Kitchen cabinets အပြင်ဘက်မီးဖိုချောင်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ရန်အတွက် Eco-Friendly MDF panel
ကျွန်ုပ်တို့၏ပြားအားလုံးသည်ထုတ်လွှတ်မှုလူတန်းစား European E1 နှင့်ကိုက်ညီပြီးကယ်လီဖိုးနီးယားလေကြောင်းအရင်းအမြစ်ဘုတ်အဖွဲ့ (CARB) ထုတ်လွှတ်မှုစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီသည်။
ယွန်းမီးဖိုချောင်ဗီရိုများသည်အရောင်တောက်တောက်၊ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ချောချောမွေ့မွေ့ရှိပြီးသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်လွယ်ကူပြီးသန်မာသော anti-fouling စွမ်းရည်ရှိသည်။ မျက်နှာပြင်သည်ရေစိုခံ။ အစိုဓာတ်ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်သည်၊ ရေနံယိုစိမ့်မှုမရှိခြင်း၊ တံဆိပ်ခတ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ကော်နှင့်ကွဲခြင်းကဲ့သို့သောပြproblemsနာများမရှိပါ။ ယွန်းထည်များသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောအမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုရှိပြီးအရောင်များသည်ပြည့်ဝ။ အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ထို့ကြောင့်လူငယ်များကိုသူတို့အလွန်နှစ်သက်ကြသည်။
အရောင် Options for Lacquer Kitchen cabinets Outdoor Kitchen design
အဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံးပစ္စည်းကိရိယာများသည် Pac Kitchen တွင်အသစ်သောမီးဖိုချောင်အသစ်ဒီဇိုင်းများကိုပို့ဆောင်ချိန်နှင့်အရည်အသွေးကိုသေချာစေသည်။
ဆေးသုတ်သည့်တံခါး၏အခြေခံပစ္စည်းသည် MDF ဖြစ်ပြီးမျက်နှာပြင်ကိုရှစ်ကြိမ်ဖုတ်။ အပူချိန်မြင့်မားစွာဖြင့်တင်သွင်းသောဆေးဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာအခြေခံပစ္စည်းတံခါး panel ကိုအပူနှင့်ခြောက်သွေ့စေရန်ခန်းခြောက်ခန်းထဲသို့ ၀ င်စေသောဆေးသုတ်ခြင်းဖြင့်ကုသသည်။ ဆေးသုတ်ပြီးနောက်ပက်ဖြန်းသည်။ ဆေးသုတ်သည့်ဘုတ်သည်တောက်ပသောအရောင်၊ ပုံသဏ္easyာန်လွယ်ကူခြင်း၊ အမြင်အာရုံအပေါ်သက်ရောက်မှု၊ လှပပြီးဖက်ရှင်ဆန်သော၊ အလွန်ကောင်းမွန်သောရေစိုခံစွမ်းဆောင်ရည်၊ အသုံးပြုသည့်အခါဂရုပြုရမည်။ ဒါဟာပြန်တယ်နှင့်ခြစ်အတော်လေးကြောက်လန့်သည်။ ၎င်းသည်ပျက်စီးသွားသည်နှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်ခက်ခဲသည်။ ဒါဟာတစ်ခုလုံးအဖြစ်အစားထိုးရမယ်, ၎င်းသည်အသွင်အပြင်နှင့်အရည်အသွေးနှင့်မြင့်မားသောဖက်ရှင်ကိုလိုက်စားရန်မြင့်မားသောလိုအပ်ချက်ရှိသောလူငယ်များနှင့်အဆင့်မြင့်စားသုံးသူများအတွက်ပိုမိုသင့်တော်သည်။
မီးဖိုချောင်ကက်ဘိနက်၊ ဗီရို၊ ရေချိုးခန်းအကန့်အသတ်နှင့်ပါ ၀ င်သောနိုင်ငံခြားစီမံကိန်း
၁၀ နှစ်ကြာပြည်ပစီမံကိန်းအတွေ့အကြုံ၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ပြီးစီးခဲ့သောစီမံကိန်း ၂၀၀၀ ကျော်၊
တစ်အိမ်လုံးစီမံကိန်းအထုပ်အတွက် ပိုမို၍ ဦး စားပေးဈေးနှုန်းရရန်သင့်အားခွင့်ပြုပါ။
Q. How To စိတ်ကြိုက် Your Kitchen Cabinets?
အဖြေ။ ။ အကယ်၍ သင့်တွင်မီးဖိုချောင်ဗီဒိုဒီဇိုင်းအစီအစဉ်များရှိပြီးဖြစ်ပါကကျွန်ုပ်တို့ထံပေးပို့နိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ မီးဖိုချောင်ဗီဒိုဒီဇိုင်းအစီအစဉ်များမရှိပါကသင်၏မီးဖိုခန်း၏အရွယ်အစားနှင့်ပုံသဏ္,ာန်၊ ကြမ်းပြင်မှဆဲလ်အမြင့်အထိ၊ တည်နေရာ၊ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းအရွယ်အစားရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ပါမည်။
အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့တွင်တင်းကြပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်သောအဖွဲ့ရှိသည်။ ကုန်ပစ္စည်းများကိုစစ်ဆေးရန်ဖောက်သည်များကိုကြိုဆိုသည်။
အဖြေ။ ။ အတည်ပြုပြီးတဲ့နောက်မှာ၊
A: ငါတို့မှာမီးဖိုချောင်ဗီဒိုပစ္စည်းတွေ၊ တံခါးပုံစံ၊ ကောင်တာ၊ စားသုံးသူတွေရဲ့ရွေးချယ်စရာတွေအတွက်ထုပ်ပိုးထားတယ်။
A: ကျွန်တော်တို့မှာကြီးမားတဲ့ပစ္စည်းစာရင်းကြီးကြီးမားမားရှိတယ်၊ PVC၊ ယွန်း၊ acrylic၊
A: ထုတ်လုပ်မှုကာလ - ကန ဦး မှာယူမှုအတွက်ရက်ပေါင်း ၆၀ နှင့်ထပ်မံအမှာစာအတွက်ရက်ပေါင်း ၃၀ - ၄၅ ရက်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ငွေပေးချေမှုသက်တမ်းမှာ ၁. ၃၀% T / T ဝါယာကြိုးဖြစ်ပြီးအရောင်းစာချုပ်အတည်ပြုပြီး ၇၀% ချိန်ခွင်လျှာဝါယာကြိုး
hot Tags:: ထုတ်လုပ်သူ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ လက်ကား၊ စက်ရုံ၊ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသည်၊ ကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင်ထားသည့်ပမာဏ၊ တရုတ်၊ စျေးပေါ၊ လျှော့စျေး၊ အနိမ့်စျေး၊ လျှော့စျေး၊ ဒီဇိုင်း၊ ၅ နှစ်အာမခံ၊ အဆင့်မြင့်၊ ဖန်စီ
2 Pac Kitchen အသစ်မီးဖိုချောင်ဒီဇိုင်းများဗီရိုများတွင်တည်ဆောက်ထားသည်
ဒီဇိုင်းမီးဖိုချောင်ယွန်း Shaker မီးဖိုချောင်တံခါး Idea
တာရှည်ခံမီးဖိုချောင်တံခါး Panel ကိုယွန်း Handless တံခါး